Ọ bụ eziokwu n'ezie: Xiaomi Mi 11 Lite NE abịarute n'ụlọ anyị | Androidsis
Emilio Garcia | | Ngwa gam akporo, Xiaomi
Nnukwu teknụzụ China, Xiaomi, ewepụtala ekwentị ọnụ ahịa dị ọnụ ala maka ihe ọ bụla ọdụ ụgbọ ala a na -ezo. Ọ bụ ihe Xiaomi Mi 11 Lite NE, otu n'ime ihe ịchọ mma kachasị ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ Haidian, nke dị na agba dị iche iche, nwere ihuenyo siri ike, nnukwu igwefoto, nwere ike niile nke 45, yana ọmarịcha ịdị nfe na ịdị mfe.
Na mgbakwunye, ngwaọrụ a dị ugbu a onyinye pụrụ iche nke ị nwere ike banye ebe a. You ga-atụ uche ya?
1 Njirimara teknụzụ nke Xiaomi Mi 11 Lite NE
1.1 SoC na ebe nchekwa
1.5 Usoro njikwa
1.6 Njikọta na mgbakwunye
1.7 Chepụta ma rụchaa
2 Etu ị ga -esi nweta Xiaomi Mi 11 Lite NE na mbelata ego
Njirimara teknụzụ nke Xiaomi Mi 11 Lite NE
Ọhụrụ Xiaomi Mi 11 Lite NE nwere ụfọdụ njikwa teknụzụ nke ahụ tụrụ n'anya na njedebe nke ọnụahịa ahụ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị ama ama bụ:
SoC na ebe nchekwa
SoC nke ọdụ a nwere bụ Ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 778G, otu n'ime ibe ike kacha dị n'etiti ahịa n'ahịa. Mgbawa arụpụtara nwere oghere 6nm dị elu na TSMC, yana cores nhazi 8 na big.LITTLE teknụzụ na-ekesa ha na ụyọkọ nke 1x Cortex-A78 na 2.4 Ghz nke arụmọrụ kacha, 3x Cortex-A78 na 2.2 Ghz, na 4x Cortex -A55 na 1.9 Ghz mgbe agụụ maka ịrụ ọrụ adịghị oke oke yana ịchekwa batrị bụ ihe kacha mkpa.
Ọ na -ejikọta otu n'ime GPU ndị ka ike, dịkwa ka Adreno 642L. Eserese nwere ihe nketa sitere na ATI / AMD mgbe ụlọ ọrụ a resịrị Qualcomm nke eserese mkpanaka, nke ahụ ka na -achị na akara aka megide Mali na PowerVR.
SoC na -ejikọkwa ngwa ngwa ndị ọzọ, dị ka DSP Hexagon 770, na ISP Spectra 570L, yana ihe nkwụnye netwọkụ X53, nkwado maka 5G, Bluetooth 5.2, GPS / GLONASS / Galileo / Beidou, yana n'ụdị abụọ ịhọrọ , na 6 na 8 GB nke LPDDR4X Ram.
Maka isi ebe nchekwa, ị nwere ike họrọ ya n'ụdị nke 128 GB ụdị UFS 2.2, yabụ ị nwere ike chekwaa ọtụtụ faịlụ na ngwa, yana ngwa ngwa ịnweta ọkụ ọkụ ngwa ngwa.
Ihuenyo nke Xiaomi Mi 11 Lite NE a bụ 6.55 ”FullHD + (2400x1080px), nwere oke buru ibu iji nwee ike ịnụ ụtọ nkwanye ugwu, egwuregwu vidiyo, ma ọ bụ gụọ nke ọma. ya panel bụ AMOLED, nke na -ekwe nkwa ịdị ọcha agba dị mma yana ezigbo ojii ojii, yana inye aka belata oriri batrị.
Ngosipụta a nwere 10-bit TrueColor, maka ịba ụba agba, yana nkwado maka Ọhụụ Dolby na HDR10. Ọ na -enye ihe na -erughị ijeri ijeri 1.07 nwere ezigbo nkenke. Banyere ọnụego ume ọhụrụ, ọ bụ 90Hz, nke kachasị mma maka egwuregwu na vidiyo.
Ha echekwara echiche banyere ịdị ike ya, ebe ọ bụ na ha jiri teknụzụ kpuchie ya Igwe Corning Glass 5. Ekele dịrị ya, ekwentị ga -anagide ọdịda ọbụna ka mma na -agaghị agbaji, na mgbakwunye na ịdị ike megide ncha.
Igwefoto Xiaomi pụtakwara iche. Iji bụrụ mkpanaka nwere ọnụ ahịa nkezi, ọ nwere igwefoto n'azụ nwere igwe 64 MP mmetụta, 1 / 1,97 "na f / 1.79. Ọ nwekwara 8 MP nke abụọ f / 2.2 sensọ obosara nke abụọ, 119º maka foto sara mbara. Ihe mmetụta nke atọ gụnyere bụ 5 MP f / 2.4 nnukwu.
Maka igwefoto n'ihu, ọ naghị ada ada, ebe ọ bụ na ha etinyere a ihe mmetụta 20 MP dị ike maka selfies na oku vidiyo.
Iji nye nnwere onwe dị egwu nke ọtụtụ awa, Xiaomi Mi 11 Lite NE nwere batrị Li-Ion 4250 mAh ikike. Na mgbakwunye, ọ na -akwado ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa na 33W, yabụ na ị gaghị echere ogologo oge ka ọ mezue mgbe ị na -eme ọsọ ọsọ.
Aka na Android 11 nwere akwa MIUI 12. Sistemụ arụmọrụ nke ụdị dị ugbu a yana ọtụtụ ọrụ akwadoro maka ngwa kachasị ugbu a. Na mgbakwunye, Xiaomi nwere sistemụ ka mmelite kachasị ọhụrụ sitere na OTA. N'ụzọ dị otu a, ị ga -enwe patị nchekwa kacha ọhụrụ yana nkwalite dị.
Njikọta na mgbakwunye
Banyere njikọta, ọ nwere USB-C maka chaja, WiFi 6 iji jikọọ na netwọkụ na oke ọsọ, Bluetooth 5.2, NFC, GPS agbakwunyere, njikọ data 5G, onye na -agụ mkpịsị aka n'akụkụ, na -akwadokwa iji DualSIM. N'ezie, ọ na -ejikọ igwe okwu na ụda stereo dị mma.
Chepụta ma rụchaa
Nhazi nke Xiaomi a ka emechara nke ọma. Na a profaịlụ dị gịrịgịrị, ịdị arọ, yana ọdịdị mara mma nke ukwuu, yana nke pere mpe, dịka ọ na -adịkarị na ngwaahịa nke ika a. Akụkụ ya bụ 160.53 × 75.73 × 6.81mm na ọ dị naanị gram 158.
Ị nwere ike ịhụ ya agba anọ dị iche:
Truffle Black (ojii)
Bubblegum Blue (acha anụnụ anụnụ)
Pink Pink (acha anụnụ anụnụ)
Snowflake White (ọcha)
Nke ikpeazụ n'ime ha bụ pụrụ icheEbe ọ nwere elu azụ dị ka iko jụrụ oyi na ụda matte, mana yana nkọwa nke snowflakes na -enwu n'akụkụ ụfọdụ mgbe ọkụ kụrụ ha.
Etu ị ga -esi nweta Xiaomi Mi 11 Lite NE na mbelata ego
Ọ bụrụ na ịchọrọ zụta Xiaomi Mi 11 Lite NE na mbelata, dị ugbu a n'ụwa niile, na karịa ebe ọ bụla ọzọ, na nnukwu ahịa ahịa Eshia Aliexpress. Ọnụ ego na-adighi ego nke ngwaọrụ ndị a bụ:
Xiaomi Mi 11 Lite NE 6 GB nke Ram na 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime - € 379
Xiaomi Mi 11 Lite NE 8 GB nke Ram na 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime - € 399
Kama, jiri ya Kupọn ego ego 09ESOW25 Ị nwere ike nweta ha maka € 25 obere, ya bụ, ọnụ ahịa ikpeazụ bụ:
Xiaomi Mi 11 Lite NE 6 GB nke Ram na 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime - € 334
Xiaomi Mi 11 Lite NE 8 GB nke Ram na 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime - € 379
Iji nweta nkwalite a ị nwere ike ime pịa ebe a zụta ya ugbu a na Aliexpress, Echefula ohere!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ọ bụrịrị eziokwu: Xiaomi Mi 11 Lite NE abịarute n'ụlọ anyị
Xiaomi Mi 11T Pro: ekwentị mkpanaaka na ọnụ ahịa ahaziri ahazi ọrịre